Danube oo timo Malag ah | Recipe
Danube oo leh timo malaa'ig ah
Ascen Jimenez | 16/11/2021 13:24 | Quraac iyo Cunto fudud
Waxaan ku baraynaa sida loo diyaariyo macaan oo, marka lagu daro quruxda, waa delicious: The Danubio
Waanu ku buuxinaynaa timo malag. In aanad lahayn timo malaa'ig ah ama aadan aad u jeclayn? Si fiican u buuxi marmalade ama labeen macmacaan leh.
Waxay noqon doontaa qaado dhowr saacadood sababtoo ah waxaan isticmaaleynaa khamiirka dubista yar. Haddii aad degdegsan tahay, waxaad kordhin kartaa qadarka khamiirka iyo waqtiyada nasashada waa la dhimi doonaa. Ka fakar in cajiinka ay tahay inuu labanlaabo mugga.
Macaan aad u macaan in la wadaago
Qolka jikada: Dhaqan ahaan
Waqtiga diyaarinta: 1 pm
Waqtiga karinta: saacadood 8
Wadarta waqtiga: saacadood 9
500 g bur
Sonkorta 100 g
30 g saliid saytuun ah
5 g khamiirka dubista cusub
1 ukun jaallo ah si aad dusha ugu rinjiso
Waxaan isku darnaa bur, caano iyo khamiir.
Waxaan ku darnaa sonkorta, sidoo kale ukunta iyo saliidda.
Waxaan isku qasnaa oo ku cajiinnaa, gacanta ama mashiinka cuntada.
Waxaan sameynaa kubad leh cajiinka oo ku rid baaquli weyn.
Waxaan u ogolaanay inay kacdo ilaa 6 saacadood.
Waqtigaas ka dib waxaan mar kale cajiin si aan hawada uga saarno. Waxaan u qaybineynaa cajiinka 16 qaybood.
Waxaan qaadanaa qayb. Waxaan sameynaa kubad, garaac oo ku rid timaha malaa'igaha ee bartamaha. Waxaan xireynaa sameynta kubbadda waxaanan dhignaa qaybta wadajirka ah ee xiriirka dusha sare ee caaryada.
Waxaan ku sameynaa si la mid ah mid kasta oo ka mid ah qaybaha waxaanan u qaybineynaa caaryada, mine 26 sentimitir dhexroor.
Waxaan u ogolaanay inay kacdo 1 ama 2 saacadood oo dheeraad ah.
Waxaan ku rinjiyeynaa dusha ukunta ukunta.
Dubo at 180º qiyaastii 35 daqiiqo. Haddii aan aragno in dusha sare uu si aad ah u browning, waxaan ku dabooli karnaa dusha sare ee caarada aluminium.
Macluumaad dheeraad ah - Jam in microwave ah
Wadada buuxda ee maqaalka: warqad dhakhtar » Recipes » Quraac iyo Cunto fudud » Danube oo leh timo malaa'ig ah